केका लागि, के भनेर जाग्ने शेरबहादुरजी ? « हाम्रो ईकोनोमी
सात दशकअघि काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकासहित सहभागी हुँदा उसको विचार, दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र गन्तव्य स्पष्ट थियो । एकतन्त्रीय राणाशासन विस्थापित गरी बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने उसको स्पष्ट अभीष्ट थियो । राजासँगको सहकार्य र भारतको सहयोगमा चलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समर्थन गर्नेहरूलाई स्वतः काङ्ग्रेसका रूपमा बुझिन्थ्यो त्यसताक ।
संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्र जनसाधारणका निम्ति बोधगम्य विषय थिएनन् । जनसङ्ख्याको धेरै सानो हिस्सा मात्र शिक्षित रहेको समयमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रलाई बुझ्ने मानिसको सङ्ख्या झन् कति हुँदो हो, अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो समयमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नेभन्दा राणाशासन अन्त्य गर्ने विषय सर्वगम्य बनेको हुन सक्छ ।
तात्कालिक सत्तापक्ष (पञ्चायत) राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा केन्द्रित देखिन्थ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र पुनर्वहालीको आन्दोलनमा । तथापि पञ्चायतले राजाको सक्रिय शासन अपनाउँदाअपनाउँदै पनि निर्दलीय प्रजातन्त्रका रूपमा आफ्नो पक्षपोषण गर्ने गरेको थियो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रियता, संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको समाजवादी कार्यक्रमका प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दथ्यो । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एक–अर्काका पर्याय होइनन्, बरु परिपूरक हुन् ।
राष्ट्रियताबिनाको प्रजातन्त्र निरर्थक हुन्छ भने प्रजातन्त्रबिनाको राष्ट्रियता लुलो हुन सक्छ । जनताका निम्ति दुवै अपरिहार्य हुन्छन्, राष्ट्रियता देखाएर प्रजातन्त्रको उपादेयतालाई उपेक्षा गर्न या प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रियता भुल्न सकिँदैन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको मुद्दालाई सन्तुलित ढङ्गले ग्रहण गर्न नसक्दा पटक–पटक दुर्घटना भएका छन् ।
नेपाली जनताले माओवादी हिंसाबाट मुक्ति खोजेका थिए, हिंसाबाट मुक्ति दिने नाममा शेरबहादुर देउवाले पहिले संवाद र युद्धविराम गरेका हुन्, सहमति नबनेपछि सङ्कटकाल पनि घोषणा भएको र यसै विषयमा उत्पन्न विवादका कारण काङ्ग्रेस पार्टी विभाजनसम्म हुन पुगेको थियो । संसद् विघटन र शाही घोषणामार्फत सत्ता परिवर्तन गर्नेसम्मका कार्य पनि माओवादी हिंसाकै अन्त्य गर्ने–गराउने नाममा भएका थिए ।
अन्ततः नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि, त्यसै आधारमा खडा गरिएको प्रपञ्चले नेपालमा धर्मनिरपेक्षतासहित जातीय आधारमा आरक्षण दिने सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सूत्रपात गऱ्यो । कम्युनिस्टहरू विचारले धर्मविरोधी हुन्, संस्कृति र प्रचलित परम्परासँग उनीहरूको दुस्मनी रहने गर्दछ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध गणतन्त्रको वकालत पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरूबाट नै हुँदै आएको हो ।
काङ्ग्रेसको नेतृत्व मन नपरे पनि, काङ्ग्रेसले उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका व्यक्ति अपरिचित र अक्षम नै भए पनि जनताले मतदान गर्ने चिह्न ‘रूख’ बनेको थियो । राजा मान्नेहरू, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण खोज्नेहरू, संसदीय प्रजातन्त्रसहित देशको समृद्धिको कल्पना गर्नेहरू सबैको मतसङ्ग्रह हुने थलो काङ्ग्रेस थियो ।
भगवान् र मूर्ति एउटै होइनन्, हुँदैनन् । भगवान् मान्नेले मूर्ति नमान्न सक्छन् । बीपी र बीपीको सालिक भन्नु पनि एउटै होइन, बीपी भन्नाले एउटा निश्चित विचार–दर्शनको प्रतीक बुझिन्छ, सालिकचाहिँ केवल बीपीको देहगत प्रतिबिम्ब मात्र हो । त्यसर्थमा आज हामी जसलाई काङ्ग्रेस ठानिरहेका छौँ, त्यो वास्तवमा काङ्ग्रेस होइन । विचार दर्शनलाई पार्टीको प्राणका रूपमा लिइन्छ, जब कि काङ्ग्रेसले प्राण त्याग गरिसकेको छ ।
जसरी प्राणान्त भएपछि मानिसलाई मानिस भनिँदैन, मान्छेको शव या लास भन्ने गरिन्छ, आजको काङ्ग्रेस दार्शनिक एवम् वैचारिक दृष्टिले ठीक त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ । दौडिरहेको कुनै पनि प्राणीको शरीरबाट शिर छुट्याइयो भने कतै व्यवधान नहुन्जेलसम्म समान वेगमा ‘त्यो’ दौडिरहन्छ । शिरबिनाको शरीर केहीबेरका निम्ति दौडन्छ, तर जति दौडिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यो सदाका निम्ति ढल्ने नै हो र काङ्ग्रेसको आजको अवस्था योभन्दा भिन्न होइन ।
काङ्ग्रेसमा जागरण पैदा गर्न सबैभन्दा पहिले उसको प्राण जगाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले शदीयौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएका वैदिक सनातन हिन्दू, बौद्ध, किरात, बोन, शिख र इस्लाम धर्म, संस्कृति तथा परम्परा रक्षाका पक्षमा काङ्ग्रेसलाई उभ्याउनु भनेको उसमा प्राण भर्नु हो । अहिलेको जस्तो ठिमाहा व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रको अवलम्बन गराउनु नै काङ्ग्रेसमा प्राण जगाउनु हो भन्नेहरूको सङ्ख्या कम छैन ।
अन्तर्राष्ट्रियतावादीहरूको सङ्गतबाट अलग गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र एकीकृत सार्वभौमिकताको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिनु भनेको ऊ पुनर्जीवित हुनु हो । तर, प्राण–प्रतिष्ठा हुने कुनै पनि कदमबिनाको जागरण वास्तवमा भैरवजात्राजस्तो मात्र हुनेछ । भैरव ठानेर मूर्तिको दर्शन गर्ने र त्यसपछि बिर्सनुपर्ने अवस्थाको काङ्ग्रेसको अर्थ के होला ?
बीपीलाई छोडेर विमलेन्द्रहरूलाई अपनाउने शेरबहादुरजीको राजनीतिले अहिलेसम्म काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्र र देशलाई योगदान पुऱ्याएको ठानियो भने ‘वीरबल’समेत हाँस्न सक्छन् । बीपीलाई अनुशरण गर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेसलाई पुऱ्याउन सक्नु नै शेरबहादुरजीको सबैभन्दा ठूलो योगदान ठहर हुन सक्नेछ । यस्तै गति र मतिले निरन्तरता पाइरहने हो भने देउवाजीले आफ्नो भविष्य हेर्न घरनजिकै बुढानीलकण्ठको मन्दिर पुगे हुन्छ, जहाँ विष्णु भगवान् उठ्नै नसक्ने गरी सदाका निम्ति उत्तानो परिरहेका छन् ।घटना र विचारबाट